“ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ counselling လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေလဲ” - “ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ counselling လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေလဲ”
“ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ counselling လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေလဲ”
ဘယ်အချိန်တွေမှာ counsellor ဆီ သွားတွေ့သင့်သလဲ?
ခန္ဓာကိုယ်မှာ နာမကျန်း ဖြစ်သလို တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်မှာလည်း မကျန်းမာတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးမှာ ကူညီသူ counsellor ဆီ ဘယ်လိုအချိန် သွားရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အကူအညီပေးသူနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်တဲ့အချိန် ရောက်လာရင် သွားသင့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအခြေအ‌နေမှာ counselling လုပ်ဖို့လိုအပ်လဲ?
စိတ်ကုထုံးကိုရှာဖွေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊ အကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ခက်ခဲသောအခြေအနေတစ်ခုခု ကြောင့်ဖြစ်စေ
ပညာရှင်တစ်ဉီးဆီမှ ကြား၍ဖြစ်စေ လာရောက်ရှာဖွေ ရယူကြပါတယ်။
နေ့စဉ်အတွေး၊ ခံစားချက်များ၊ အမူအကျင့်များတွင် ရုန်းကန်နေရခြင်း။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ/ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ/လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်မှုဒဏ်များကို ခံစားခဲ့ရ/ခံစားနေရခြင်း။
ပူပင်သောကများခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိခိုက်အောင်ပြုလုပ်လိုခြင်း၊ သေကြောင်းကြံစည်လိုသော အတွေးများခံစားနေရခြင်း။
ဆိုးရွားသော အခြေနေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မိမိချစ်ခင်သူများ အသက်ဆုံးရှုံးမှု၊ အခြားဆုံးရှုံးမှု၊ အထီးကျန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်း။
ဘဝမှာ ကိုယ်နေထိုင်ချင်သလို မဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ဟု ခံစားနေရခြင်း။
ဘဝပြောင်းလဲမှုအချိန်ကာလတွေဖြစ်တဲ့ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ လက်ထပ်ချိန်၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲချိန်၊ မိဘဖြစ်လာတဲ့အချိန်၊ သွေးဆုံးချိန်၊ လူလတ်ပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အငြိမ်းစားယူချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အသက်ကြီးခြင်း စတဲ့ ဘဝပြောင်းလဲမှု အချိန်ကာလတွေမှာ အဆင်ပြေစွာနေထိုင်နိုင်ရန် ကြိုးစားရုန်းကန်နေရခြင်း။
အတိတ်ကအဖြစ်အပျက် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုက သင့်ကိုတားဆီးနေခြင်း။
ဘယ်လိုပြဿနာ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါစေ လုံခြုံတဲ့နေရာ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု နဲ့ ဝေဖန်မှုတွေမရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကုထုံးပညာရှင်များနဲ့အတူ ပြည့်စုံတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ဘဝရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကာတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အသစ်တွေကို အတူတူရှာဖွေနိုင်ဖို့ သင့်မှာ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ သင်ပြောသမျှ ကိုနားထောင်ပေးတဲ့၊ ပြောချင်သမျှတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခံစား ပြောဆိုလို့ရတဲ့ အပြင် သင်ပြောသမျှ အကြောင်းအရာများကို လျှို့ဝှက် ချက်အနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းပေးမယ့် နေရာတစ်ခုကနေ နွေးထွေးစွာနဲ့ သင့်ကိုအကူအညီပေးလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။